Iyo Audacity inoverengeka inoenderera. Maforogo maviri akaonekwa | Linux Vakapindwa muropa
Yakanga iri nyaya yenguva ye sarudzon yevatsva Audacity varidzi ve inosanganisira yakasarudzika telemetry mune yako application inogona kusarudza vamwe vanogadzira kuti vagadzire dzimwe nzira. Uye, isingasviki vhiki mushure mekunge Muse Boka razivisa mutemo waro mutsva wepachivande, patova neanenge maviri mumabasa.
Ini handidi kuve shiri yekurwara, ndinomira kunze kweLibreOffice, iyo Mate desktop (Uye pamwe Rocky Linux yakawedzerwa) pane mashoma kesi emabhirifiki mapurojekiti anowedzera pane kusagutsikana. Vashandisi network zvishoma uye vobva vakanganwa, nepo maforogo achipera mukusaziva.
1 Iyo Audacity inoverengeka Chii chakashata ne telemetry?
2 Maforogo maviri matsva
Iyo Audacity inoverengeka Chii chakashata ne telemetry?
Carlos muimbi amateur uye anoda yakavhurika sosi. Mushure mekubuda pamasaiti esarudzo yekuisa telemetry mu Audacity, akashevedza Uber ndokuenda kunotora mushonga weCovid. Sezvavaimunyevera kuti aigona kuva nefivha shoma, akaenda kukhemisi ndokunotenga Paracetamol kubva murabhoritari inozivikanwa uye kuCoca Cola kuti adzikise.Akabhadhara zvese nekadhi rake rechikwereti.
Sezvo paive nechiteshi chepasi pevhu pedyo nechitoro chemishonga, akafunga kutora mukana wedzimwe nzendo dzakange dzasara kubva pasipoti yake yemwedzi.
Pazvinhu zvese izvi, zvinyorwa zvakasara, zvinyorwa zvakatumirwa kumakambani anoona nezvekuzviongorora uye izvo zvinozozvishandisa kuita mhedziso.
Ini ndinojekesa, hakuna akadaro Carlos, kunze kwekunge tese tiri zvishoma. Izvo hazvigoneke kurarama ne modicum yekunyaradza muhupenyu hwazvino pasina kusiya miitiro. Saka zvakakodzera kushamisika kana isu tisiri pamusoro-kuita kutsamwa.
Ini handina chokwadi nemhinduro, Sei mugadziri wechirongwa chisingabatana neInternet achida yangu IP kero? Sei uchiisa zera rekurambidzwa? Nekudaro, ivo vatove kujekesa kuti iyo telemetry chishandiso inosarudzika, uye pamwe avo vane basa rekusiyana kwakasiyana havaisanganisi iyo pavanogadzira mapakeji.
Ehe, pane zvekare nyaya yekutyora rezinesi reGPL. Asi izvo zvakauya mushure mekunyunyuta kweteremetry.
Maforogo maviri matsva
Tinofanira kujekesa izvozvo hapana kana maviri emapurogiramu atakakurukura akagadzirira kushandiswa mumabasa anoda kugadzikana. Muchokwadi, iwe unofanirwa kunyora kodhi yekodhi.
Iko hakuna zvakare nhau, kunze kwekunge zvimwe mune chinoonekwa chimiro.
In the peji kubva kuGitHub tsanangura se multitrack odhiyo edhita / rekodhi yeWindows, MacOS, GNU / Linux uye mamwe masisitimu anoshanda, dIyo inovandudzwa neboka revanozvipira seyakavhurika sosi software.
Kurekodha kubva kune odhiyo madhizaini (chaiwo kana chaiwo).
Export / kuendesa kwakawanda akasiyana mafomati mafomati (anowedzeredzwa neFFmpeg).
Yakakwira mhando, inosanganisira kusvika 32-bit inoyerera odhiyo odhiyo.
Plug-ins ine rutsigiro rweVST, LV2 uye AU plugins.
Kunyora muNyquist yakavakirwa-mukati mutauro wekunyora, kana muPython, Perl, uye mimwe mitauro.
Inopokana sampling uye multitrack nguva yekugadzirisa.
Kuwanika, kusanganisira yekugadzirisa keyboard, rutsigiro rwekuverenga screen, uye rutsigiro rwekutaura.
Anobatsira maturusi ekuongorora chiratidzo, kusanganisira odhiyo.
Tsananguro ye chirongwa ichi, Inofambiswa nesangano remahara rekutsigira software, zvakangofanana neKusimba. Ini ndinofungidzira kuti yakatorwa kubva ku Audacity imwe. Zvisinei, vakatora dambudziko kuti vatsanangure zvinangwa zvavo
Zvinangwa izvo Audacium anoedza kuzadzisa zviri nyore:
Dzoserai Audacity kune zvayaimbove, isina mitsara yekuparara (GH Nhau dziripo dzeizvozvo), kana iri nyore kwazvo kugadzirisa cheki (chete pakutanga, kwete nguva nenguva).
Wedzera zvinhu zvitsva zvinoda vanhu, uchiteerera nharaunda.
Ita kuti kodhi yekodhi ive nyore kushanda nayo, isinganyanye kuvhiringidza newbie.
Ndinovimba vanogadzira ese mapurojekiti vane njere dzakajairika kubatanidza kuedza Uye ngatiregei kupedzisa sekuwanda kwazvinoitika nezvakawanda zvakavhurwa sosi mapurojekiti. Huwandu husingaperi hwemaforogo akawedzerwa pamwechete haushandise zvinoshandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iyo Audacity inoenderera inoenderera. Maforogo maviri akaonekwa
Mubvunzo hausi wakawanda kana vachishanda pachirongwa chimwe chete kuti chirarame kune chepakutanga, asi kana zvirinani havana kuzviita nechishuwo vozopedzisira vasiya, izvo zvinoda vanogadzira izvi kuwana kushambadza, ini Ndinovimba vanoshandisa midhiya senge yepakati, quora, reddit uye 4chan kukwezva vanhu vasingangoda kubatana chete asi vanoshandisa forogo.
Lime Taylor akadaro
Ivo vanopenga vanotenda kuti ndivo mastersprohackers, vanofunga kuti ndiEdward Snowden, kunyangwe chokwadi chiripo ndechekuti ivo HAVANA, HAKUNA munhu akakosha kumakambani (kungomedza kushambadza nekutenga zvigadzirwa) uye vasingataure kuhurumende, kuti havasi VANHU yekufarira, uye HAPANA anofanirwa kutariswa.
Ivo chete vanhu vanotya telemetry vanhu vakaita saiye ataurwa pamusoro, Edward Snowden, hacktivists, vanoita zvematongerwo enyika nevatori venhau.
Uye zvakadaro, ini ndinopokana zvakanyanya kuti mastersprohackers vanoshandisa Audacity. HAHA.
Iko kune huwandu hwenzvimbo inotyisa yeLinux! : c
Ivo vanofungidzirwa kuti vakakosha zvakanyanya kana ivo vasingazive maitiro ekuisa kugovera kana kushandisa terminal, asi kuita zvinhu zvemasters muComputer Security, 99% havana chavanoziva. HAHA.
Pindura kuna Lima Taylor
Ini ndinofungidzira iwe uchiziva fananidzo yezambuko iro chitima raipfuura nemazuva ese. Mazuva ese ivo vaichinja chidimbu uye mushure mechinguva, zambuko rese rakanga riri idzva uye vafambi vaipfuura napo mazuva ese havana kana kucherechedza.
Izvo zvinoenda kune izvi zvinhu; isu tinopa mune zvishoma panguva nekuti "havazondisora", "ndezvevabheki chete" kusvikira zvatibata.
Izvo hazvisi izvo chete izvo musimudziri anogona kuita nedata rangu, ndezvekuti varege ivo zvishoma nezvishoma vatidyire isu uye isu hatina kana kuirovera iyo.
Liam Taylor akadaro
Kana iwe usina kuziva, oh mukuru mumiriri / hacktivist anotambudzwa neNSA! software inoda kushandiswa kweteremetry.
Iwe hausi munhu, uye ini handisi munhu. Ita kuti zvive pachena kwavari kuti hurumende hadzifanirwe kuongorora (mumwe nemumwe) zviitwa zvavo, nekuti izvo zvatoitwa nema algorithms akakura anotsvaga nekutsvaga zvingangoita kutyisidzira kuchengetedzeka kwenyika.
Ivo vanotenda kuti vakakosha chaizvo, vanofunga kuti yavo data yakakosha kwazvo kune iyo "yepamusoro chakavanzika" mhando, apo hurumende hadzina hanya uye makambani anoda kuwana uye kuwana mari yakawanda, zvichivaita kuti vamedze zvese zvinobvira kuziviswa, saka kuti vanotenga zvigadzirwa zvavo kana masevhisi.
Ibva pahunde paya paunofunga kuti uri, ini ndatoita.
Ini ndaive ndakapenga nezve data rangu, nekuti ehe, ndizvo zvavari, alarmist uye paranoid. Ini ndaifunga kuti nyika yaitenderera pandiri, kungofanana neese maalarm-paranoid panhau ye telemetry, kusanganisira iwe.
Ikoko ini ndanga ndichishandisa software, kwete nekuti ndiyo yaive yakanakisa, asi nekuti "inopa zvakavanzika zvakawanda," kunyangwe hazvo software yacho yaive yakaderera zvakanyanya muzvimiro kumakwikwi ayo.
Mhinduro ndeiyi: kana iwe usiri wekuba, iwe hausi wezvematongerwo enyika, hausi muratidziri, hausi mutapi wenhau anotambudzwa, kana usinga gare munyika ine hutongi ... Sei uchifanira kutya telemetry ? Uri panjodzi yekufa here? Uri panjodzi yekukandwa mutirongo here?
Kana iwe uri kutya kuti ivo vachazoona [kuti ...]?
Ini ndinoshandisa Linux nekuti ndinoida, kwete nekuti ndinotya yakaipa Microsoft.
Pamusoro peizvozvo, iyo telemetric dhata inoshandiswa kugadzirisa software, asi zvirokwazvo nharaunda ine huturu yeLinux inogara ichiyamwa kana vakapa chero chinhu kudzoka senge leeches.
Pindura kuna Liam Taylor
Iwe hauzive izvo imwe kambani inoshandisa telemetry ye. Uye chii chayo chichaishandisa mangwana